Kurapa Marijuana uye Vets PTSD Gweta Mune Peoria, IL | Thomas Howard
Ipo Illinois mitemo ichiri kupomora mhosva yekutora mbanje, iyo nyika inobvumidza kuve nekushandisa mbanje yekurapa kune avo vakatakura kadhi rekurapa mbanje. Vanochengeta vanotenderwa zvakare kurima chirimwa ichi kuti chishandiswe, asi paine kurambidzwa kwakasimba kurambidzwa kwakafanana kuvarwere kuti vawane pundutso.
Nyika yacho iri pakati pe makumi matatu nematanhatu inobvumidza kushandiswa kwe cannabis kushandiswa mune vanhu vane hutano mamiriro Kurapa mbanje nezvibodzwa zvayo zvave kushandiswa kurapa mamiriro akasiyana siyana, akadai sechirwere cheCrohn uye glaucoma. Inowanikwa mune dzakasiyana siyana, semaruva akaomeswa, edibles, uye tinctures.
Muna 2013, gavhuna wenyika akasainira Medical Cannabis Pilot Program Act iyo yakabvumidza kurimwa, kutengeswa uye kushandiswa kwekurapa mbanje. Pasi pemutemo weIllinois, mbanje inongotarisirwa semutemo kana yatengwa nemurwere anokwanisa kana mutarisiri kubva kumutengesi ane marezinesi uye ane marezinesi.
Murwere anofanirwa kunge aine kadhi yekurapa mbanje uye cannabis inofanira kungoshandiswa chete kurapa mamiriro ataurwa mukadhi. Pasi pechirongwa ichi, pane makumi mana nematanhatu mamiriro anogona kurapwa mbanje dzekurapa dzakadai sekenza, HIV / AIDS uye chirwere cheParkinson, pakati pevamwe. Muna 41, chirongwa ichi chakawedzerwa kusvika 2016.
Une chero mubvunzo here?
Kurapa Marijuana uye PTSD MuPeoria, Illinois.
Pakavepo zvidzidzo zvakasiyana-siyana pamhedzisiro yekurapa cannabis paPTSD. Imwe fundo yakaitwa kuLangone Medical Center yakaratidza kuti zvekurapa cannabis inogona kubatsira kudzorera yakajairika chiyero cheanamamide mune vanhu vanotambura nePTSD. Anandamide ndeye endocannabinoid yechisikigo. Yakatumidzwa zita reSanskrit rinoreva kuti "mufaro" kana "kufara," chinhu ichi chinoshanda nekumutsa system ye endocannabinoid iyo inodzora manzwiro emufaro, kutya, uye kunetseka.
Mune mazwi akareruka, anandamides anoita seakasarudzika antidepressants. Chajairika kugadzirwa kweye endocannabinoid inova inosimbisa kuti manzwiro ekutya, kusagadzikana, kusuruvara anodzora. Akaderera mazinga eanamamides anogona kukonzera zviratidzo zvinowanikwa muPTSD vanorwara,
Kurapa Marijuana yePSTD Under Illinois Mutemo
Muna 2016, iyo nyika yakarairwa neDare reHurumende muCook County kuti riwedzere PTSD kune runyorwa rwematambudziko akabvumidzwa kurapwa mbanje. Izvi zvakange zvaitika mushure mekunge Gavhuna Rauner aramba kurudziro yakati wandei yenyanzvi kuti isanganisira PTSD nezvimwe zvinorwara mune runyorwa rwemamiriro ezvinhu anogona kurapwa nanachiremba vechipatara pasi pechirongwa. Vhiki yakatevera, Gavhuna Rauner akasaina SB 10 kusanganisira PTSD seyakakodzera mamiriro ekushandiswa kwembanje pakurapwa mbanje. Izvi zvakabatsira pakubatsira masoja pamudyandigere kubata vets PTSD, kunyanya kune avo vane zviratidzo zvisingarapike nemishonga yechivanhu yakadai seanodzvinyirira zvinodhaka uye antidepressants.
Mavhesi anotambura nePTSD anorayirwa kuti awane ongororo yePTSD sechimwe chezvinhu zvinodiwa kuti uwane kadhi rekurapa mbanje. Kune avo vane makadhi aripo, chimiro chinogona kuwedzerwa kune rondedzero yemamiriro ayo kadhi rinoshandiswa. Kune makiriniki akasiyana siyana anobatsira veterani kunyorera kadhi rekurapa mbanje kune avo hutano mamiriro. Vets dzinofanirwa kuchenjera kuti dzidzivirire chero nyaya dzinogona kubuda neVA isingatarise mbanje sekurapwa kwePTSD.
Illinois inodzika mirau yakasimba pakushandiswa kwepamutemo kwekurapa mbanje. Izvo zvakakosha kuti ubvumidzwe uye ubvumidzwe PTSD uye cannabis kushandiswa varwere vets vasati vatanga kushandisa mbanje yekurapa yemamiriro avo. Kazhinji vanachiremba kunzvimbo dzakakura dzekurapa havakurudzire mbanje dzekurapa, zvinoreva kuti vets vanofanirwa kutsvaga vanachiremba vane maitiro avo, uye kazhinji vanotsamira kumushonga wekubatanidza, kana bvunza yako yepanzvimbo yekubvumirana.
apo Mitemo yeI Illinois ichiri kupara mhosva yekutora mbanje, nyika inobvumira kutora uye kushandiswa kwembanje pakurapa kune avo vanotakura kadhi rekurapa mbanje. Vanochengeta havabvumidzwe kurima chirimwa ichi kuti chishandiswe pakurapa. Yese yekurapa mbanje muI Illinois yakasimwa mukati medzimba dzakati kuti dzekurima nzvimbo dzakapararira pamusoro penyika.